7 Sir oo aaney Xaaskaagu Kuu Sheegayn Waligeed-Qeyb ka Daalaco Sanduuqa Siraha Dumarka | Shabakada Gabooyaha
Si kasta oo aad u tanah nin caqli badan u dadaal badan waxaad ogaataa iney jirtaa siro badan oo aadan ka gun gaadhi karin xaaskaaguna ay kaa qarineyso waligeedna aan laga yaabin inaad ka ogaato.
Hadaba waxaan akhristayaasha u soo bandhigeynaa 7 sirood oo aan marna laga yaabin iney xaaskaagu kuu sheegto:
Waxay kaa dooneysaa inaad dhanka wax bixinta ku horreyso si kasta oo ay qani u tahay waxna u haysato. Waxay dooneysaa iney dareento oo ay ku xasisho inaad adigu mas’uul ka tahay qoryska wax kasta oo loo baahdana aad adigu bixineyso.
Sireheedii gaarka ahaa ee wakhtigii doobnimada marna laga yaabo iney kuu sir baxdo, sababtuna waa iney laabtay faly kasta oo guurka ka horreyay isla markaana ay doonayso iney fayl cusub furto oo aaney dib u jalleecin wixii hore.
Waxay Kuu Xiistaa laakiin kuuma sheegayso, ragga qaar waxay aaminsan yihiin inaan dumarkoodu u xiisin la seexadkooda oo aaney dan ka lahayn, taa arrinku waa ka duwan yahay oo dumarku waxay aad u xiiseeyaan in raggooda Illaahay u banneeyay ay la sheekaystaan oo ay la ciyaaraan.
Munaasabad kasta waxay kaa filaysaa hadiyad goonni ah, haddii ay ku nooshahay wadamada galbeedka waxaa fiican inaad u ilaaliso munaasabadaha dhalashada Ciidaha oo ay kaa filayso hadiyado qiimo badan, haddii ay gudaha dalka joogtana xilliyada ku weyn agteeda waxay kaa fileysaa sidoo kale inaan hadiyado u geyso taasi waxay sii kobcineysaa jacaylka dhexdiinna.
Mararka qaar waxay u baahan tahay Aamusnaan, haddii aad aragto haweynaydaada oo aamisan oo aan dooneyn iney hadasho ha u qaadan iney xanaaqsan tahay ama ay murugeysan tahay, maxaa yeelay? Mararka qaar waxay u baahan tahay nasiinno ay kaga nasato howsha guriga iyo buuqa caruurta.
Xaaskaagu waxay jeceshahay iney wax kasta la wadaagto; sidaa darteed waxaa kugu haboon inaad howsheeda oo dhan la wadaagto sida ay iyadu rabo, xitaa haddii ay noqoto shaqadeeda gaarka ah.
Markasta waxaa waajib ah in ay xaaskaagu noqoto mid qurux badan oo da’yar adiga aragtidaada, oo dumarku waxay aad u qadariyaan ammaanta raggooda, taas oo uga dhigan inaad agtooda muhiimad ka leedahay si aadna aad u daneynayso.
Hadaba maanta waxaan qeyb ka furnay sanduuqa siraha dumarka, xishoodka Illaahay u dhaliyay darteedna aaney u soo bandhigan karin arrimahan raggoodana aaney u sheegi karin, laakiin la rabo iney raggu ku baraarugaan oo ay arrimahaan fahmaan.